Sustainable fashoni: chii, maitiro uye matipi | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 20/04/2022 12:00 | Environment
MaEcolabel anowanzo kuuya pamberi pakutaura nezvazvo fashoni yakagadzikana, makakatanwa ane chekuita nekugadzirwa mumafekitari ari kure, asi kuedza kukuru kugadzirisa uye kuwanda kwemachira echisikigo asina zvigadzirwa zvine chepfu. Sezvineiwo, maonero aya anosimbiswa pasi rese nekuda kwekuwedzera kwemakambani epasi rese uye vechidiki mabhizinesi vari kupa shanduko nyowani kune iyo fashoni yakagadzikana.
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kukuudza zvese zvaunoda kuziva nezve fashoni yakagadzikana, maitiro ayo uye zvakanakira.
1 Mufashoni wakasimba
2 Tsika fashoni tsika
2.1 usatenga zvakawanda
2.2 Isai mari mumhando dzemafashoni dzakagadzikana
2.3 Usakanganwa fashoni yevintage uye zvipfeko zvekare
2.4 Kuroja zvakare isarudzo
2.5 Dzivisa ecoposturing
2.6 Nzwisisa kukanganiswa kwezvinhu uye machira pachako
2.7 Funga kuti ndiani anogadzira zvipfeko zvaunopfeka
2.8 Tsvaga mabhureki akazvipira kusainzi
2.9 Tarisa mabhureki ane maitiro akanaka pane zvakatipoteredza
Nheyo dzeyakagadzikana fashoni bhizinesi modhi dzinopfuura nepakati kuchengetedzwa kwezviwanikwa, iyo yakaderera ecological kukanganisa kwezvinhu zvinoshandiswa (iyo inofanirwa kukwanisa kuiswa gare gare mucheni yekudzokorodza), kuderedzwa kwekabhoni tsoka uye kuremekedzwa kwehupfumi uye nharaunda yebasa. mamiriro evashandi vanobatanidzwa kubva kune yakabikwa kusvika pakutengesa.
Indasitiri yefashoni inotozvirumbidza nevagadziri vakawanda vane mukurumbira, mamodheru uye vanhu vane mukurumbira vanorwira fashoni yakagadzikana. Izvi zvinosanganisira Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow naSummer Rayne Oakes.
Fesheni yakagadzikana iri kuwana zvishoma nezvishoma nzvimbo yayo muindasitiri. Zvakare kwave nekukura mukuronga kwemakwikwi, mitambo, makirasi, zvirongwa zvekuisa, ruzivo rwehunyanzvi mumablog nezvimwe..
Semuenzaniso, Portland Fashion Week, iyo ichangopedzwa muUS, yakangogara zana muzana eco-hushamwari dhizaini. Muguta guru reSpain, The Circular Project Shop yakavhurwa gore rino mukuyedza kuwana mukana mumakwikwi eMadrid catwalk nekupa zvipfeko zvinogara. Iyo Sustainable Fashion Days yakaitirwawo muMadrid kwemakore mana. MuArgentina, Verde Textil inopa zvigadzirwa zvine zero yemamiriro ekunze uye 100% kuzvipira munharaunda, uchitengesa online.
Mhosva inofanirwa kutariswa zvakanyanya ndeyeiyo Heavy Eco brand, yekutanga fashoni kambani inogadzwa mumajeri, ichigadzira zvipfeko zvinogara. Pamusoro pebasa rekubatanidzwazve kwevanopfuura 200 matsotsi eEstonia akashanda nekambani, 50% yemubereko inoenda kunobatsira vanhu vasina pekugara nenherera muguta reTallinn.
Tsika fashoni tsika
Ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekubata mazana emabhiriyoni ehembe dzinogadzirwa pasi rose gore negore. Harriet Vocking, chipangamazano wesangano rinochengetedza Eco-Age, anokurudzira kuti tizvibvunze mibvunzo mitatu tisati tatenga zvipfeko: «Chii chatinoda kutenga uye nei? Chii chatinonyatsoda? Tichaishandisa pane inokwana makumi matatu nguva dzakasiyana ”.
Isai mari mumhando dzemafashoni dzakagadzikana
Zvino zvatasarudza kutenga nemaziso akawanda, ndeipi nzira iri nani yekutsigira mabhureki akanyatso tsigiro kuti arambe aripo. Semuenzaniso, Collina Strada, Chopova Lowena kana Bode vanoshandisa zvinhu zvakadzokororwa mumagadzirirwo avo. Inokubatsirawo kusefa mhando dziripo zvichienderana nerudzi rwembatya dzavanadzo pamusika, ingave zvipfeko zvemitambo zvakatsiga seGirlfriend Collective kana Indigo Luna, zvipfeko zvekushambira seStay Wild Swim kana Natasha Tonic, kana denim seOutland Denim kana Re/ Donate.
Usakanganwa fashoni yevintage uye zvipfeko zvekare
Nemapuratifomu akaita seThe RealReal, Vestiaire Collective kana Depop, kutenga fashoni yevintage uye zvipfeko zvechipiri hazvina kumbova nyore. Funga kuti hauzongopa chipfeko mukana wechipiri, asi iwe uchabatsirawo kuderedza kukanganiswa kwezvakatipoteredza kwewadhirobe yako. Vintage fashoni zvakare ine mukana mukuru wekuti zvipfeko zvayo zvakasarudzika. Kana zvisiri, tarisa kuti Rihanna kana Bella Hadid anotaridzika sei, mafeni makuru.
Kuroja zvakare isarudzo
Kana isu tine atypical muchato kana gala (nekuda kweCOVID, hongu), imwe inogamuchirwa sarudzo ndeyekurenda zvipfeko zvedu. Semuenzaniso, chidzidzo chechangobva kuitika muUK yakagumisa kuti nyika inotenga mbatya mamiriyoni 50 muchirimo choga choga uye inodzipfeka kamwe chete. Kufurira, handiti? Hapana mubvunzo kuti isu tiri nani kuti tisiye tsika iyi, kunyanya kana iwe uchifunga kuti sekondi yega yega inopfuura yakaenzana nerori rekutakura marara ekupisa (kana kuguma mukuraswa kwemarara).
Brands vaona kuti tave kuziva nezve ecological tsoka yedu. Ndicho chikonzero ivo vanowanzo edza kunyura mune zvigadzirwa zvine zvirevo zvisina kujeka zvinogona kutsausa kana kumiririra zvisizvo kusimba kwembatya dzavo. Usanyengerwa nema gestures egirinhi uye usapfuure zvinorehwa “zvinogoneka”, “girinhi”, “mutoro” kana “kuziva” kuti iwe uchaona pane akawanda mavara. Tarisa kuti zvavanotaura ndezvechokwadi here.
Nzwisisa kukanganiswa kwezvinhu uye machira pachako
Kana uchitenga zvine mwero, zvakakosha kuti unzwisise kukanganisa kwemidziyo inoumba zvipfeko zvedu. Kutaura zvazviri, mutemo wakanaka ndewokudzivisa mafiibhi ekugadzira akadai sepolyester (chinhu chatinowana mu55% ​​yembatya dzatinopfeka) nekuti kuumbwa kwayo kunosanganisira mafuta efossil uye zvinotora makore kuti aore. Iwe unofanirwawo kubhadhara kune machira echisikigo. Semuenzaniso, organic donje inoshandisa mvura shoma (uye hapana mishonga yezvipembenene) kana yakura pane yakajairika donje.
Zvatingagona kuita ndezvekutsvaga zvipfeko zvine zvitupa zvinogara zviripo kuti tive nechokwadi chekuti machira uye zvinhu zvavanoshandisa zvine chekuita nepasirese: semuenzaniso, Global Organic Textile Standard yedonje nemvere; Zvitupa zveDehwe Rekushanda Boka rematehwe kana anonamira Sango Stewardship Council chitupa chetambo dzerubha.
Funga kuti ndiani anogadzira zvipfeko zvaunopfeka
Kana denda rakaita chero chinhu, kwave kuratidza kuomerwa kwezuva nezuva kunoitwa nevashandi vazhinji muindasitiri yemachira. Saka zvakakosha kuti vave nechokwadi chekuti vanowana muhoro wekurarama uye vane mamiriro ekushanda akanaka. Vimba mhando dzinoburitsa ruzivo nezve mihoro yavo, kuhaya uye mamiriro ekushanda mufekitori, chero kwavanenge vari.
Tsvaga mabhureki akazvipira kusainzi
Imwe nzira yekuudza kana kambani ichida zvepachokwadi kudzikisa kukanganisa kwayo kwezvakatipoteredza ndeyekuona kana yakazvipira kune inoenderera mberi sainzi zviyero. Zvigadzirwa zvinonamatira papuratifomu yesainzi-yakavakirwa kutungamira zvirongwa, kusanganisira Burberry kana Kering, hofori yeindasitiri yeumbozha kuseri kweGucci kana Bottega Veneta, inofanirwa kutevedzera Chibvumirano cheParis chekudzikisa kuburitswa.
Tarisa mabhureki ane maitiro akanaka pane zvakatipoteredza
Makambani ekugarisa akaita seMara Hoffman kana Sheep Inc ari kutofunga nezve maitiro avanogona kuita zvakanaka pane zvakatipoteredza pamwe nekuderedza maitiro avo. kurima patsva, shasha yehunyanzvi hwekurima sekudyara mbeu kana mbesa dzekuvharisa, iri kuwedzera kutsigirwa kweindasitiri nechinangwa chakajeka: kuvandudza kunaka kwevhu uye kuchengetedza zvipenyu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve fashoni yakagadzikana uye kukosha kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Mufashoni wakasimba